के म एउटा साँचो विश्वासी हुँ ? – Word of Truth, Nepal
बचाइनका लागि के म उहाँमा, केवल उहाँमा, भर परेको छु (प्रेरित १६:३१)? के म एउटा सानो नानीको जस्तो विश्वास लिएर उहाँकहाँ आएको छु (यूहन्ना ६:३५,३७; मत्ती ११:२८)? के मैले विश्वासद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगतरूपमा आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा लिएको वा ग्रहण गरेको छु (यूहन्ना १:१२)? उहाँ जो हुनुहुन्छ (यूहन्ना ८:२४), उहाँले जे गरिदिनुभयो (१ कोरिन्थी १५:३-४) र उहाँले जे भन्नुभएको छ (यूहन्ना ६:४७) — के म आफ्नो पूर्ण व्यक्तित्वको सम्पूर्ण वजनले उहाँमै भर परिरहेको छु?
आफूलाई सोध्न सकिने अर्को अर्थपूर्ण प्रश्‍न यो हो: यदि म आजै मरेर परमेश्वरको सामु उभिँदा उहाँले मलाई “मेरो पवित्र स्वर्गमा तिमीलाई किन पस्न दिऊँ” भनेर सोध्नुभयो भने, म कस्तो जवाफ दिऊँला त?” यदि मेरो जवाफले कुनै पनि हिसाबमा म आफैलाई (मेरो योग्यता, मेरा आफ्नै कामहरू, मेरो धार्मिक कामहरू आदिलाई) इङ्गित गर्दछ भने त्यसले म सनातनको चट्टानमा उभिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। मानिसहरूले आफैमा भरोसा कसरी गरिरहेका हुन्छन्, केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौं:
“परमेश्वरले मलाई उहाँको पवित्र स्वर्गमा पस्न दिनुपर्छ किनभने मेरो जीवनकालमा मैले खराबभन्दा असल नै बढी गरेको छु।”
“परमेश्वरले मलाई उहाँको पवित्र स्वर्गमा पस्न दिनुपर्छ किनभने म दस आज्ञा पालन गर्ने प्रयास गर्दछु।”
“परमेश्वरले मलाई उहाँको पवित्र स्वर्गमा पस्न दिनुपर्छ किनभने म फलानो चर्चको सदस्य हुँ” आदि।
म परमेश्वरको पवित्र स्वर्गमा पस्न सक्ने एउटै मात्र कारण छ। सही जवाफ यो हो: “म परमेश्वरको पवित्र स्वर्गमा पस्ने सक्ने एउटा कारण मात्र छ, केवल एउटा। त्यो यो हो, मेरो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको कारण। उहाँले क्रूसमा सम्पन्न गर्नुभएको कार्य बिना मैले मुक्ति पाउन असम्भव थियो। उहाँले मलाई सित्तैंको वरदानस्वरूप दिनुभएको उहाँको जीवन बिना म उहाँको पवित्र स्वर्गमा पस्न असम्भव हुनेथ्यो। उहाँ नै मेरो एउटै आशा हुनुहुन्छ। मसित भएको धार्मिकता उहाँ नै हो अनि मलाई आवश्यक पूर्ण धार्मिकता उहाँ नै हुनुहुन्छ। धन्यवाद मेरा प्रभु, तपाईंले मेरो प्राण बचाउनुभयो।” हेर्नुहोस्, यस जवाफले आफूबाट परै इङ्गित गर्दछ, अर्थात् मुक्तिदातालाई, केवल उहाँलाई इङ्गित गर्दछ!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-03-01 13:49:242020-04-27 15:08:29के म एउटा साँचो विश्वासी हुँ ?
मुक्ति पाउन मैले के गर्नुपर�...बाइबल एक अद्‍भुत पुस्तक